Mogadishu Journal » 2021 » March » 28
Muqdisho:-Wasaaradda Cafimaadka iyo Daryeelka Bulshadda waxey dadweynaha ku nool magaaladda Mogadishu la wadaagaysaa Goobaha Caafimaad ee laga heli karo Tallaalka Ka hortaga Covid-19 ee dhaaman dagmooyinka Gobolka Banadir. Qoraal ka soo baxay Wasaarada ayaa lagu sheegay in...
Cristiano Ronaldo ayaa faallo ka bixiyay jawaabtii uu siiyay Portugal oo loo diiday inuu ku guuleysto guushii ugu dambeysay ee Belgrade Sabtidii. Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuusan waligiis isbeddeleynin ka dib markii uu xanaaqay caro ka dib markii kabtanka Portugal loo...
At least 14 people wounded after attackers detonate explosives outside a packed church during Palm Sunday Mass. 28 Mar 2021 Two suicide bombers detonated explosives outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar, wounding fourteen people on the first day of the...
Dhowrkii cisho ee la soo dhaafay si gooni ah baan ugu fooganaa dhaq dhaqaaqyada is badalka siyaasadeed ee ka jiray Gedo, gobolka labbaad ee dhulka soomaalida inuu ugu weyn yahay la sheego, dhaq dhaqaaqasi mar dadka gobolkaasi dagan neecaaw udgoon iyo nabar walwaleed oo ka feydmay...
Ciidamada Danab oo howlgal ku dilay sargaal katirsan Al Shabaab (Daawo Sawirada)
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa howlgal qorsheesan ay ka fuliyeen tuulo hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ay ku dileen sargaal katirsanaa Al Shabaab iyo dagaalyahano ilaalo u ahaa. Howlgalkan ayaana si gaar ah uga dhacay tuulada buulo...
Laftagareen oo 3 qodob oo Muhiim ah kala hadlay danjire Kate Foster (Sawirro)
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta-gareen ayaa la kulmay Safiirka cusub ee Boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Marwo Kate Foster. Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa ugu horeen soo dhaweeyey Safiiradda Wuxuuna...
15 Xildhibaan oo laga mamnuucay fadhiyada Golaha shacabka Somalia (Magacyada)
Muqdisho:-Warar ayaa sheegaya in Guddoomiye Max’ed Mursal uu saxiixay qoraal ku saabsan in illaa 15 xildhibaan aanay ka soo qaybgeli karin Kulanka Baarlamaanka ee Isniinta soo socota, iyadoo magacyada Xildhibaanada la dhigay albaabada laga galo Villa Somalia. Hogaamiyaha xisbiga...